Zuva: Ndira 2, 2020
Marmaray inomisa rekodhi ine mazana mashanu emapasita
Cahit Turhan Gurukota rezvekutakura nekuvaka, TCDD Transport inofambiswa neMarmaray iri muguta inopa mukana wakanaka kwazvo mukufambisa kwevanhu muIstanbul, YHTs uye zvimwe zvitima, zvichitendera kuenderera kweEurope. Kuparadzanisa Tsime-Kazlıçeşme [More ...]
Turkey dzaifanoiswa Corridor Vanova Yasvika
Transport uye Infrastructure Minister Cahit Turhan, mikuru njanji muna 2019 kubva wenyaya kweTurkey ndomumwe wokutanga dzaifanoiswa nezvitima kubva China kuEurope kutaura ndiro kuenderana, Marmaray uye Baku-Tbilisi-Kars njanji [More ...]
Logistics Logistics zvingoro Turkey Vanova Master Plans Future
Transport uye Infrastructure Minister Cahit Turhan, pamwe Asia ari huru chokufambisa corridors pakati Europe uye akati Turkey kunangidzirwa kuti aumbe kupinda logistics chawo. Nekutungamira kwezitima pamberi pekudyara mukati meyero yeLogistics Master Plan, [More ...]
Cahit Turhan Gurukota rinoona nezvekutakura nekuvakisa zvivakwa, newimhanya yepamusoro-soro (YHT) inofanirwa kumiswa, huwandu hwevanotakura zuva nezuva vanotarisirwa kusvika zviuru makumi matatu mugumi rekupedzisira ra2020, akadaro. Turhan, TCDD Transportation Inc. [More ...]
Kart54, iyo inopa nekukurumidza, yakapusa uye yakavimbika chekufambisa kune vekwaSakarians neMetropolitan Municipality, yakagashira vanhu makumi mana nevaviri, mazana matanhatu nenomwe muna 2019; nhamba yekushandiswa yakapfuura mamirioni gumi nemashanu pagore. Sakarya [More ...]
Kocaeli Intercity Bus terminal Yakashanda Vanhu Mamiriyoni matatu Mugore rimwe
Kocaeli Intercity Bus terminal ndiyo yave sarudzo yekutanga yevagari mukufambiswa kwekufambiswa mushure mezvigadzirwa zvitsva zvakagadziriswa neMetropolitan Municipality. Vafambi, pamwe nevaya vanoda kushanya, vatumire mauto, vanoshandisa nguva mune cafe uye [More ...]
DEMAR, inova yemubatanidzwa inovambwa nevashandi vechitima, yakavharwa. Imwe nzvimbo achakupai chaiyo mumisika basa Turkey Wagon Industry A.Ş. (TÜVASAŞ) pakati Railways Workers Union nhengo yakarongwa 1983, SSI akagadza simbi Consumer Cooperative [More ...]
Izvo zvairambidzwa kumirira vapfuuri nemabhanari kuIstanbul Airport. Nzvimbo nyowani ichagadzirirwa kugamuchirwa kwevakapfuura. Ismail Sanli, Istanbul Airport Regional Administrator, yakagamuchira komisheni yekuchengetedza [More ...]
Yenikapı Hacıosman Metro Ichave uri 8 Mugovera
Iyo Istanbul Metropolitan Municipality ichashandira paM2 Yenikapı - Hacıosman mutsara paMugovera nemitima 8 paMugovera. Kunyangwe vatakuri vakatakura huwandu hunokwira nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana. Metro, inobatsira weIstanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Mamirioni gumi nematatu TL Mirango yegumi nematatu Chikepe Chinoshatisa Gulf cheIzmit mune 1 gore
Kocaeli Metropolitan Municipality Dhipatimendi redziviriro uye Timu yekuongorora zvikwata, haina kupa nzvimbo kusvibiswa mu Izmit Bay. Crews inoshanda maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki, ngarava gumi nematatu muna 7 [More ...]
Tünektepe Teleferik yakatakura vanhu mazana mashanu ezviuru kumusangano uyu muna 2019
Antalya Metropolitan Municipality ANET A.Ş. Tünektepe Teleferik Kituo, Sarısu uye nzvimbo dzevaraidzo dzeTopnami, Kadın Plajı uye Zıp Zıp Park, iyo yaishandiswa naTektek, vakaputsa rekodhi yevashanyi muna 2019. Zvivakwa mukati megore [More ...]
Denizli Metropolitan Municipality, iyo inounganidza mikana yose kune wese munhu kuita mitambo kubva pa7 kusvika 70 kuDenizli, anotanga yemahara ski kosi muDenizli Ski Center inova nzvimbo inokwezva yekushanya kwechando. Denizli Metropolitan Municipality, [More ...]
Denizli Cable Mota uye Bağbaşı Plateau Yakabata vanhu zviuru zvishanu pazuva rekutanga kweGore Nyowani
Pazuva rekutanga ra2020 vagari veDenizli vakadungamidzana kuenda ku1500-metres yakakwira Denizli Cable Car uye Bağbaşı Plateau. Bağbaşı Plateau izere nevagari vanoda kuona mufaro wechando pazuva rekutanga kweGore Nyowani [More ...]